ဆရာဝန်ကြီးနှစ်ဦး၏ အယူအဆများ ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆရာဝန်ကြီးနှစ်ဦး၏ အယူအဆများ …….
ဆရာဝန်ကြီးနှစ်ဦး၏ အယူအဆများ …….
Posted by fatty on Jul 5, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
အခုတလော ကျနော် ကိုယ်ငွေ့ငွ့လေးနွေးပြီးဖျားဖျားနေတာ ၃ ပါတ်လောက်ရှိသွားပြီ။ ဆီးချို မတိုင်းဖြစ်တာလည်း ၃ လလောက်ရှိပြီ။
ကြာတော့လဲ ပျင်းလာပြီပေါ့။ ခေါင်းမနောက်ရင် ဆီးချိုမတက်လို့ဘဲဆိုပြီး အတင့်ရဲကာ အချိုလေးများထည့်ထည့်စားမိသည်။
ကိုယ်ပူငွေ့ငွေ့က မကျတော့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ဆရာဝန်ကြီးနှင့် booking ချိတ်ရတော့သည်။
ထိုပြနေကြဆရာဝန်ကြီးနှင့်မပြရခင် အဒေါ်အိမ်က ၀ါဆိုသင်္ဃန်းကပ်ဖိတ်တော့ သွားလိုက်၏။
ထိုမှာတင် ကွဲကွာနေတာကြပြီဖြစ်သော နိုင်ငံရပ်ခြားေ၇ာက်နေသည့် အစ်မ၀မ်းကွဲ နှင့် သူ့အမျိုးသားတို့ရောက်နေတာတွေ့ဖြစ်ကြသည်။
အမ၏အမျိုးသားမှာ တချိန်က မန်းလေးဆေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဖြစ်သည်။
အများဆုံးပြောကြတာက ဆီးချိုအကြောင်း ..။ မင်းဘယ်သူနဲ့ပြနေလဲဆိုတော့ ကျနော်ပြနေသည့် ဆရာဝန်ကြီးမှာလဲ မန်းလေးမှဆင်းသော သူ့တပည့်တယောက်
သူတို့နှစ်ဥိး၏ အယူအဆများကွာခြားချက်ကို တင်ပြလိုပါသည်။ ဘယ်သူက ဘာပြောတာလဲဆိုသည်ကိုတော့ စည်းစောင့်ရမည်မို့ မဖေါ်ပြလိုပါ။
တစ်ဦးက … အင်ဆူလင်ထိုးပါလား … အင်ဆူလင်ထိုးတာ အသက်ရှည်စေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အမြဲထိုးရန်မဟုတ် အစားများသွားသည့်အခါ ထိုးရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက …. အင်ဆူလင်ထိုးရမည့် အဆင့်မဟုတ်သေး အင်ဆူလင်ထိုးလျှင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ တချိန်ချိန်မှာတော့ ထိုးရမည့်အဆင့်ရောက်လာနိုင်သည်။
ကဲ အဲသလိုကွဲပြားနေပါသည်။ အင်ဆူလင် Auto ထိုးပေးသောခါးပါတ်ရှိပါသည်။ ခါးမှာပါတ်ထားလျှင် ဆီးချိုတက်ခြင်းကို အလိုအလျှောက်တိုင်းပြီး အလိုအလျှောက်
ထိုးပေးပါသည်။ ၀ယ်ဖို့စိတ်ကူးပေမဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ပါ။ …။
နောက်ဆုံးတော့ … ဘာမှမသိတာကောင်းပါတယ်လို့သာ ယူဆရမလိုဖြစ်နေပါ၏။
ီကိုဖက်တီးက အခြေအနေ မတူတဲ့ ဆရာဝန်နှစ်ဦးကို တွေ့တော့ ခက်သွားတာပါ ..
သွေးစစ်တာ .. ပစ္စည်းစုံတာ ခြင်း ကွာနေပြီလေ ..
ဒီမှာ (မြန်မာပြည်မှာ) သွေးစစ်ဖို့ ကိုယ်တိုင် လုပ်မလား ဆေးခန်းသွားစစ်မလား ဓါတ်ခွဲခန်း သွားမှာလား ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ် ..
ဒီတော့ မယုတ်မလွန် .. ထိန်းနိုင်တဲ့ သောက်ဆေးကို အားကိုးပါတယ် .. ဆင်ခြင်စားသောက်နေမယ် ဆိုရင် ဆေးမှန်မှန် စားနေမယ် ဆိုရင် ဆီးချိုဆိုတာ သောက်ဆေးနဲ့ ထိန်းထားဖို့ ကောင်းပါတယ် ..
အင်ဆူလင် ထိုးဆေးကို အဓိက သုံးရတဲ့လူနာ အများစုက အမျိုးအစား (၁) ထဲမှာ ပါတဲ့ လူငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဆီးချိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ် .. သူတို့က အင်ဆူလင်ထိုးမှသာ ကုလို့ ရပါတယ် .. သောက်ဆေးနဲ့ မရပါ .. လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုမှာလဲ .. ရောဂါ အဆင့်မြင့်လာရင် .. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တွင်း အခြားခွဲစိတ်ဖို့ .. အနာကြီးကြီး .. အဖျားပြင်းပြင်းတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ သောက်ဆေးကို အားကိုးလို့ မရတော့ အင်ဆူလင်ကို ခေတ္တခဏ ထိုးရပါတယ် ..
နိုင်ငံခြားမှာတော့ စက်ပစ္စည်းတွေလဲ စုံတယ် .. လူတွေကလဲ ပုံမှန်အားဖြင့် ညွှန်ကြားချက်တွေ လိုက်နာ လွယ်တော့ အင်ဆူလင်က စကြတယ် .. ဒါပေမယ့် ဆေးစာအုပ်တိုင်းမှာတော့ သောက်ဆေးက စ ပါလို့ ရေးထားပါတယ်
တစ်ယောက်က ပြောပါသေးတယ် ဆေးက ၅ နှစ်လောက်ဆိုရင် ယဉ်လာတဲ့သဘောရျိတယ်တဲ့။
ကျနော်က ၈ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။
ဆီးချိုဆိုတာ ထိမ်းထားနိုင်မှ ။ အသက်ငယ်တဲ့ အရွယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ဆီးချိုက အရမ်းကိုဆင်ခြင်ရတယ်။ ဆရာဝန်ဆေးပေးတိုင်းလည်း ပျောက်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆီးချိုဖြစ်ပြီဆိုတည်းက ပျောက်စရာမရှိတော့ဘူး။ ဆီးချိုကို မတက်အောင်ဘဲထိန်းထားရတော့မှာ။ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်….. သိနေတာကိုပြောပြပေးတာ။ သွေးတိုင်းတဲ့စက်တစ်လုံးဝယ် မိုးလင်းအိပ်ရာနိုးနိုးခြင်း သွေးချိုပမာဏတိုင်းထား။ (30)မိနစ်နေရင် breakfast စား၊ ဘာစားတယ်ဆိုတာကို မှတ်ထားပမာဏကိုပါမှတ်ထား။ဥပမာ..ကော်ဖီတစ်ခွက်၊မုန့်တစ်ခုပေါ့။ စားပြီးလို့(2)နာရီကြာမှာ သွေးချိုပမာဏပြန်တိုင်း။ ဘယ်လိုကွာလဲစစ်။သွေးချိုတက်လာသလား။ မတက်ဘူးလား။တက်တယ်ဆိုရင် ဒါရှောင်ရမယ်။မရှောင်နိုင်သေးရင် ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ ဆေးကို တခြမ်းလောက်ပိုသောက်လိုက်။ဥပမာ ဒိုင်ယာမိုက်က်၇ွန်လိုဟာမျိုးပေါ့။နေ့တိုင်းတော့မရဘူးပေါ့။တခါတရံပေါ့။ နေ့ခင်းလည်း အဲဒီလိုတိုင်း ၊အဲဒီလိုနည်းနဲ့ အစားအသောက်ကို ထိန်းပြီးစား။အစာကိုအာဟာရလည်းရှိအောင် ကိုယ့်စိတ်ကူုးဥာဏ်နဲ့လည်း ညှိယူပေါ့။ လမ်းကတော့ မဖြစ်မနေလျှောက်ကိုလျှောက်ရမယ့် အစီအစဉ်ထဲမှာပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ ဆီးချိုဖြစ်ရင် နည်းစနစ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်လုပ်ပြီး ဆင်ခြင်တာအကောင်းဆုံး။ ဆရာဝန်တွေက ဆေးတွေပဲပေးနိုင်မှာ။ ဆီးချိုသမားတွေအတွက်ကတော့ သောက်ဆေးကအတူတူပါပဲ။အင်ဆူလင်ထိုးတာကတော့ အကျင့်ပါတယ်။အင်ဆူလင်ထိုးရင်ကို ဆီးချိုသမားတွေက စိတ်ဓါတ်ကျသွားတတ်တယ်။ ဆီးချိုသမားက အဆာမခံဘူးနော။ ဆာရင်လက်တွေခြေတွေရင်တွေတုန်ပြီးနေမရ ဖြစ်လာတယ်။ ဆီးချိုသမားတွေမှာ လျော့ဖြစ်တာ(2)မျိုးရှိတယ်။ ဆီးချိုတက်ရင်လည်း လျော့ဖြစ်တတ်သလို ဆီးကျအရမ်းကျရင်လည်း လျော့ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆီးချိုတက်လို့ လျော့ဖြစ်ရင် ကုသချိန်(3)နာရီရတယ်တဲ့. ဆီးချိုကျလို့ လျော့ဖြစ်ရင် ကုသချိန်(1)နာရီ ပဲရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ လုံးဝဒဏ်ရာရလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒဏ်ရာက ပျောက်ချိန်အရမ်းကြာသလို ကုသမှုအားနည်းရင် နာတာရှည်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဓိကက လမ်းကို ပုံမှန်လျောက်ပြီး အစားကို အတိုင်းအတာနဲ့ဆင်ခြင်စားရမယ်။ဆီးချိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် အကုန်လုံးကိုဆင်ခြင်ရတယ်။ အဲဒါပေမဲ့ …… အရက်တစ်ပက်လောက်တော့ ပုံမှန်သောက်လို့ရတယ်တဲ့။ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော် ကိုဖက် တကယ်ကို စေတနာနဲ့ပြောပြပေးတာပါ။မေပြောတဲ့အထဲမှာ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်။
ဦးဖက်အတွက်မြန်မာ့ ဆေးမြီးတိုလေးတစ်ခုလောက်ပေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ပျားမြီးရွက် ကိုဦးဖက်စားသုံးကြည့်ဘူးပါသလား၊အဲဒီပျားမြီးရွက်က ဆီးချိုတက်တာကိုထိမ်းပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်၊ကျနော့် အဒေါ်ဟာ ဆီးချိုဖြစ်တာ(၁၀)နှစ်ကျော်သွားပါပီ။အင်ဆူလင်လဲထိုးရလွန်းလို့ အပ်ချစရာနေရာတောင်မရှိတော့ပါဘူး၊သုံးကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် သွားရောက်ယူနိုင်မယ့်နေရာကိုညွန်ပြပေးပါမယ်။
မေ့ အမကတော့ အခု မထိုးတော့ပါဘူး.. သူ စိန်တပွင့်ဆေးနဲ့ သက်သာနေပါတယ်…
ညီမ ဦးလေးကလဲ ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါ ရှိပါတယ်.. ခုလို ပို့စ်တင်ထားတော့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်ရတာပေါ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အဖေကလဲ ဆီးချီု နဲဆုံးရတာဆိုတော.ကောင်းကောင်းသိတယ်
ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် စဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိတာထက်ကြာမှသိတာများကြတယ်
သတိထားရမှာက ကိုယ်မှာရှိတဲ. သွေးကြောတွေပိတ်ပြီးခြေတွေလက်တွေ
အပေါ်ပိုင်းအတွက်ဆိ်ု ဆီးချိုသမားတွေဟာ မျက်လုံး အိမ်ထဲက ရက်တန်နာ
သူငယ်ချင်းတွေ ဆီးချိုသမား ဆိုရင် အစားအသောက်ကို ဆင်ခြင်ပါဝိတ်မတက်ပါစေနဲ.
ပျားမီးရွက်ကိုတော့ အိမ်မှာစိုက်ထားပါတယ် အခုတော့ဆေးအနေနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ နှုတ်ပစ်လိုက်ပါပြီ
အိမ်ကလဲကျဉ်းကျဉ်းဆိုတော့လေ ..။ အကြံညဏ်များပေးကြသူအပေါင်းအား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဖြစ်ပြိးမှတော့ ဘယ်တတ်နိုင်တော့မလဲ။ မဖြစ်သေးသူများ အစားအသောက် အနေအထိုင်ဂရုစိုက်ကြဖို့
ဘဲ အထူးမှာကြားလိုပါတယ်။ ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အလွန့်အလွန်စိတ်ညစ်ရပါတယ် ..။
ဒီဘက်ခေတ်ပိုပြီးဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့ဒေါက်တာများရေးသားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေပြီးကျင့်သုံးရမှာပေါ့။ ကိုယ့်အသက်ထက် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အစားအသောက်ဆိုတာမရှိဘူးလေ။ အားလုံးရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကိုဖတ်ကြည့်ပါဦး။ အားလုံးက အကောင်းဆုံးအကြံတွေဘဲ ပေးကြမှာပါ။ အဲ….. မှာဖို့တစ်ခုမေ့သွားတယ်။ ဘယ်ကိုသွားသွား သကြားလုံးလေးဆောင်ထား။ ဆီးချိုဓါတ်လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လျှပ်တစ်ပြက်သုံးလို့ရတယ်။ဗိုက်အဆာလွန်နေပြီး တုန်လာတဲ့အချိန်မျိုးဆို သကြားလုံးလေးတစ်လုံးလောက်သာငုံထားလိုက် ။ အိုကေသွားလိမ့်မယ်။စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့
ကျေးဇူးပါ … ကျနော်သိသလောက် အတက်ဖက်များတဲ့သူနဲ့ အကျဖက်များတဲ့သူ ၂ မျိုးတွေ့ရပါတယ်။
ကျနော်က သကြားဓါတ်အတက်ဖက်များပါတယ်။ အဆာလွန်ရင်တော့ Maythakhin ပြောတဲ့အတိုင်း
တုန်လာတာပါဘဲ။ ကျနော်ပြဿနာက ခြေထောက်တွေမခံနိုင်အောင်ညောင်းတာပါ။ အာရုံကြောတွေ
အားနဲလာပါတယ် Vitamin B အုပ်စုတော့သောက်နေရတာပါဘဲ။ တဦဦးက ကိုယ့်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်
သိနေရက်နဲ့ ပြန်ပြီး response ပေးဖို့ နောက်ကျနေပါတယ်။ တယောက်ယောက်နဲ့ စကား အကြာကြီးထိုင်ပြောလို့မရပါဘူး .. ကိုယ်က အားနာပြီးသူပြောသမျှတွေနားထောင်ပေးနေရရင်
ခေါင်းနောက်လာပါတယ် ..။ အနိစ္စသဘောနဲ့ ကိစ္စမြန်မြန်ချောသွားမှပြီးမယ်ထင်ပါရဲ့။
စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ ကိုဖက်ရဲ့ ဆီးချိုသက်က (8)နှစ်ပဲရှိသေးတာ။ ဆီးချိုသက်နှစ်ပေါင်း(45)ကျော်တဲ့အထိ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သွားတဲ့သူတွေရှိတာပဲ။ အဓိကက အစားအသောက်အနေအထိုင်ကို သတိနဲ့ထိမ်းပေးဖို့ပါဘဲ။medical checkup ပြန်လုပ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်တိုင်ပင်လိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ ။ ကုသမှုခံယူပြီး အနားယူပစ်လိုက်ရင်လည်း ဆီးချို၊သွေးချိုကျသွားမှာပါ။ ဆီးချို၊သွေးချိုတွေ ကျသွားမှ စနစ်သစ်လေးနဲ့ပြန်ပြီး ကောင်းအောင်ထိန်းထားပေါ့။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
May I guess ??? It can be wrong !!! I am notadoctor.
“တစ်ဦးက …. အင်ဆူလင်ထိုးရမည့် အဆင့်မဟုတ်သေး အင်ဆူလင်ထိုးလျှင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ တချိန်ချိန်မှာတော့ ထိုးရမည့်အဆင့်ရောက်လာနိုင်သည်။
I think. he isarelative of you & most probablyaDoctor practicing in Foreign.
“တစ်ဦးက … အင်ဆူလင်ထိုးပါလား … အင်ဆူလင်ထိုးတာ အသက်ရှည်စေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အမြဲထိုးရန်မဟုတ် အစားများသွားသည့်အခါ ထိုးရန်ဖြစ်သည်။”
He might beaDoctor practicing in Myanmar.
If you areaclosed relative of Doctors, then, they normally not advice/recommend you to take strong medicine ( especially, steroiod medicine ). They will treat you longer & safer way ( less side effect ).
If you are notarelative, they normally chooseashort method for their fame ( for example: machine gun therapy & broad spectrum ).
In foreign, Normally, Doctor doesn’t prescribe unless deem necessary.
For example, I havealittle hypertension.
But, my wife hasn’t allowed me to getasingle pill, since I arrived to Australia (2 yrs ago), she even doesn’t allow me to haveavitamin tablets. But, she made thorough medical check up to me every6monthly.
On the other hand, my mother treated me to takeahypertension pill daily when I was in Myanmar.
I have no doubt about their love upon me,
But, the ideas are different.
Thanksalot Foreign Resident for your kind support with your idea.
As far as I know, single pill is not enough for hypertension. Some doctors here are used to
treat with two kinds of concerned medic. But may be here you seemed you like to mention
.. single pill means : only depends on pill. In Myanmar one of the popular madic for
hypertension is CARDIVARD 3.25 or 6.25 which is also protect to Heart failure.
But I think it is very different way of treatment between Myanmar and other countries
Anyhow I am very glad to have this opportunity to share each other.
my wife has not allowed me to getasingle pill = I did not get any medicine from my wife ( I did not get even one tablets ) during this2years stay in Australia.
Machine gun therapy = If the doctor is not sure about diagnosis ( what disease patient suffered ), then doctor givesalot of medicines for all suspected diseases ( may be for2or3diseases ).
For example, patient have fever & doctor is not sure, patient suffered malaria or common illness, then he gave medicine for both2diseases.
Let say, doctor don’t care about what patient will suffer ( weakness & side effects ).
He only care for his fame ( cure the patient instantly ).
I didn’t mean all doctors are like this, but some really are.
when you need to get some treatments from Myanmar Doctors,
say them ( in advance ) that your father/mother/brother isadoctor,
then, they will treat you with great care ( as long as their knowledge permitted )
Sorry to reveal,
ဆီးချိုကုတာတိုင်းရင်းဆေးမှာအင်မတန်လွယ်ပါတယ်။ side effect လဲမရှိဘူး။ ဇီဖြူသီး(သို့) ဖန်ခါးသီး ၂လုံးခန့် ထမင်းစားတိုင်းအမြဲစားပေးပါ။
ဟုတ်လား။ ခါးတဲ့ဟာအမြဲတမ်းစားပေးရင် ရော